Tafakatra 214 ireo matin’ny valanaretina: iray lavon’ny covid-19, enina ny tranga vaovao eto Analamanga | NewsMada
Naina Andriantsitohaina: Le bien de la population en ligne de mire ...septembre 28, 2020
Ben’ny Tananà Andriantsitohaina Naina: “Ilana fitsipika ny fitantanana ny tanànantsika” ...septembre 28, 2020
Tafakatra 214 ireo matin’ny valanaretina: iray lavon’ny covid-19, enina ny tranga vaovao eto Analamanga
Par Taratra sur 16/09/2020
Midina hatrany. Miisa 34 ireo tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina covid-19, omaly tamin’ny fitiliana miisa 552 natao, araka ny tatitry ny CCO. Avy eto Analamanga ny enina amin’izany raha 11 ny any Alaotra Mangoro. Valo kosa ny any Diana raha telo ny any Sava.
Mbola niverenany indray ny any Itasy
Niverenany indray kosa ny any Itasy, ahitana tranga roa raha efa tsy nisy narary intsony tany an-toerana fa sitrana avokoa. Roa tahaka izany ny any Vatovavy Fitovinany raha iray avy ny any Matsiatra Ambony ary telo ny any Sofia.
Etsy an-daniny, iray lavon’ny covid-19 ka avy any Amparafaravola izany.
Olona faharoa maty tany Amparafaravola
Olona faharoa matin’ny valanaretina tato anatin’ny herinandro, tany amin’ity distrika any Alaotra Mangoro ity izy io. Tafakatra 214 izany izao ireo nodimandry noho ny coronavirus eto amintsika, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.
Na izany aza, miisa 41 ireo sitrana ka anisan’ny maro tamin’izany ny tany Menabe, miisa 12 sy ireo 10 tany Alaotra Mangoro. Tafakatra 14 452 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana tamin’ireo mitondra ny tsimokaretina, miisa 15 803. Nidina ary nihena ho 1 135 kosa ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny toe-pahasalamany. Miisa 29 kosa ireo marary anaty fahasarotana “forme grave”, amin’izao fotoana izao.
Naina Andriantsitohaina: Le bien de la population en ligne de mire 28/09/2020
Ben’ny Tananà Andriantsitohaina Naina: “Ilana fitsipika ny fitantanana ny tanànantsika” 28/09/2020
Nizeria: miakatra hatrany ny vidin-tsolika ao aminy 28/09/2020
Fihariana: sahirana izao ny mpanao biriky 28/09/2020
Fivadihan’ny toetr’andro: miantraika amin’ny toekarena sy ny fahasalamana 28/09/2020